Brezila: Ny baolina kitra sy ny fitiavan-tanindrazana nandritra ny mondialy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Jolay 2010 11:13 GMT
Manohana ny ekipam-pirenenao ve ianao raha mandray anjara amin'ny fiadiana ny ho Tompon'ny amboara eran-tany izy? Mifanandrina amin'i Pays Bas androany eo amin'ny ampahaefa-dalana amin'ny fiadiana ny Tompon-dakan'ny amboara eran-tany ny Brezila.Tsy ny Breziliana rehetra no hanao eny io fanontaniana napetraka etsy ambony io, tsy araka ny zavatra mety ho eritreretin'ny olona maro izany. Tsy voatanisa ireo mpitoraka bilaogy no manohana tsy amin'ahiahy ny ekipa Breziliana, na izany aza, misy ny tsy manohana.
Milaza ny momba ny onjan'ny fiadiana amin'ny dokam-barotra mikasika ny fitiavan-tanindrazana nandritry ny fiadiana ny Tompon-dakan'ny amboara eran-tany i Marcelo Pereira, avy amin'ny Planeta Laranja [Orange Planet, pt], manambara izy fa maneho “fatoritoriana azo ibaikoana itambarana” izany, izay ” valin'ny fironana tsy am-piheverana sy fandadiana fotsiny”. Manazava ny ifandraisan'ny baolina kitra sy ny fitiavan-tanindrazana izy ary milaza ireo “tsy fifanohizana” nasehon'ireo antsoina hoe ” Ireo tia tanindrazana amin'ny fiadiana ny Tompon-dakan'ny amboara eran-tany “:
Afangaron'izy ireo amin'ny tanindrazany ny “ekipam-pirenena” ary mihevitra izy ireo fa mijoro ho an'ny vahoaka ireo mpilalao; lazain'izy ireo ho adidy amin'ny maha-olombelona ny baolina kitra fa tsy ho endrika fialam-boly fotsiny ihany ; tsy olona tia tanindrazana mihitsy izy ireo raha ny endrika matotra. Nefa dia niova tampoka ho “tia” an'i Brezila izy ireo nandritry ny fiadiana ny amboara eran-tany ; Ny ekipam-pirenena amin'ny baolina kitra ihany no tian'izy ireo (izay milalao ny fiadiana ny amboara eran-tany ihany) . Tsy raharahiana tsotra fotsiny izao ireo karazana baolina kitra (an'ny vehivavy, ny tanora, baolina kitra anaty trano, amoron-dranomasina); Mihevitra izy ireo fa natao amin'ny asa fanasoavana manan-danja ho an'ny tanindrazana ireo mpilalao rehefa mandaka ny baolina ho ao anaty tsatokazo ; Mihevitra ireo mpanohana fa tsy baikoin'ny seraseram-pifandraisana izy ireo, nefa dia ny zavatra lazain'ireo fiaran'ny seraseram-pifandraisana mihitsy no ataony ; miato amin'ireo asany ny firenena mba hijery ny “ekipa” milalao; mihevitra izy ireo ho manana zo hanankorontana amin'ny fotoana rehetra ka tsy manaja ny zon'ny vahoaka amin'ny filaminana.
Somary mandeha lavitra aza i Elio Botogoske manazava ny fahitany ny momba ny tanindrazana sy ny fitiavan-tanindrazana. Nampidirin'i Elio, ao anatin'ireo antony dimy tsy hanohanana ny Ekipam-pirenena Breziliana [pt] :
1. Ny fitiavan-tanindrazana , ny momba ny tanindrazana ary ny fitiavan-tanindrazana diso tafahoatra no foto-kevitra tena tsy misy mpitita indrindra eran-tany.
“Hay, ahoana ary ny amin'ny fanavakavahana sy ny fasisma ?”, hoy ny sasany aminareo manontany. Eny ary, nipoitra avy amin'ny fampiarahana ny fanavakavahana taloha elabe sy ny hambom-po-pirenena tamin'ny taon-jato faha-19 ny fasisma. Efitra mifanohitra amin'ny fasisma ny fitiavan-tanindrazana , ny momba ny tanindrazana ary ny fitiavan-tanindrazana diso tafahoatra. Indrindra tamin'ity fiadiana ny Tompon-dakan'ny amboara eran-tany ity, izay izaho vao nahita ny karazana fiantsiana sy fitiavan-tanindrazana diso tafahoatra namporisihin'ny seraseram-pifandraisana amin'ny dokam-barotra sy ny vaomiera misahana ny lafiny teknika amin'ny ekipam-pirenena. Hoatry ny hoe andeha hiady isika. raha izay no zava-misy, raha tena andeha hiatrika ady marina isika, dia hitsoaka an-daharana aho .
2. Etazonian'ny lalao baolina kitra i Brezila: ny fahefana an'olon-tokana, firangorangoana sy fanambonian-tena .
Mahatsiaro ny tenany ho ambony i brezila raha lalao baolina kitra no resahana, tena manosika ny tenan-dry zareo mihitsy ry zareo ary manantena foana ny handresy . Ny herisetrantsika, ny hevitry ny olona amintsika, ny firangorangoantsika amin'ny lalao baolina kitra no isan'ny hanamarika ny maha-isika antsika rehefa lasa manana fahefana amin'ny zavatra tena manan-danja isika . Fanampin'izany, jereo ny tsy fisian-dikan'ny fifandrafiana amin'i Arzantina, ny hanoanam-pahefany te-handresy foana, ny fiheverany azy ho ambony mihoatra ireo vahoaka sy ireo firenena hafa, satria ananany maro ireo lohan'ny mpandresy amin'ny lalao baolina kitra .
"Antony dimy hanoherana an'i Brezila amin'ny fiadiana ny Tompon-dakan'ny amboara eran-tany 2010 ary koa amin'ireo manaraka rehetra " (Cinco motivos para torcer contra o Brasil nesta Copa e em todas as outras, pt), CC
Tsy i Elio irery no mihevitra ady raha mijery ny fiadiana ny amboara eran-tany . Mino i Cruz de Savóia [pt] fa samy tokony hitovy lanja, na samy hitovy fahefana hitondra miaraka ny firenena, raha ampitahaina ny toeram-pilalaovana, ny baolina kitra sy ny toeram-piadiana:
Ny akanjon'ny ekipam-pirenena Breziliana eto no famantaram-pirenena lehibe indrindra – Mampiaina ny fahalefahana na koa ny fahatezerana izany toy ny asetrin'ny sainam-pirenena Breziliana na koa ny hiram-pireneny. Ny ekipam-pirenena Breziliana – hay, sahala amin'ny hoe mbola misy ekipa hafa ery! – no tena endrika feno fahefana matanjaka indrindra amin'ny firaisam-pirenena. Angamba , miaraka amin'ny Tafika, izay zavatra hany tokana eran-tany mahavita ny hampifampijery ho samy Breziliana ny vahoaka avy any Pernambuco sy São Paulo . Tsy maninona izany zavatra izany na tsara na ratsy , tsy haiko – toy ny hoe na ny ekipam-pirenena na ny tafika mety ho tsara na ho ratsy: tsy mampaninona izany .
Na izany aza, ity misy hevitra hafa amin'ny hevitra naseho tao amina bilaogy iray tetsy ambony, misy koa ireo Breziliana tia baolina kitra ary mieritreritra ny hanohana ireo ekipa hafa ankoatry ny ekipa Breziliana. Manazava i Carlos Vinicius Rosenburg ao amin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe No nation gave me birth [pt] [tsy misy firenena nahateraka ahy?], ny antony hanohanany ny mpifanandrina amin'ny Breziliana eo amin'ny toeram-pilalaovana : i Arzantina. Aminy, tsy milalao amin'ny fitiavana ny lalao baolina kitra na amin'ny fahazotoana ireo ekipam-pirenena Breziliana amin'izao fotoana izao, toy ireo kintan'ny mpilalao Breziliana tahaka an’ i Zico, Pelé, Romário eny fa na dia i Cafu aza izay nandrombaka ny amboara eran-tany FIFA tamin'ny taona 2002, taona farany nandresen'i Brezila tamin'ny fiadiana ny Tompon-dakan'ny amboara eran-tany . Hoy izy :
(…)Hanohana an'i Arzantina aho amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany 2010! Eny! Izany no marina. Ny hermanos [Mpirahalahy, amin'ny teny Espanõla]. Leo an'ity fitondran-tena mody hendry, feno fihatsaram-belatsihy, hadalana, fomba efa lany andro ” amin'ity tsy fahitana ho lazaina lalandava ity ” (Salve, Lobo) izay manjaka amin'ny ekipa Breziliana aho . Manohana an'i Arzantina sy i Maradona aho ka handresy ny fiadiana ny Tompon-dakan'ny amboara eran-tany, amin'izay ho lany andro ireo milaza azy ho tsara toetra . Mety hiala eto ity fitiavan-tanindrazana amboamboarina diso tafahoatra ity ary hifarana any Boenozera , satria Breziliana fotsiny ny vahoaka mandra-pitsohan'ny mpitsara ny famaranana ny fiadiana ny Tompon-dakan'ny amboara eran-tany . Ao aorian'izay, ho adinon'izy ireo ny zavatra rehetra ary hiverina hangalatra ireo iray tanindrazana aminy, eny amin'ny toeram-pivarotana lehibe na eny amin'ny filaharana ao amin'ny banky na tsotra fotsiny miverina mifamono izy ireo noho ny fifamaliana amin'ny fitohanan'ny fifamoivoizana . Tiako haharesy i Arzantina satria manana mpanazatra izay efa olona nanan-danja teo amin'ny fiadiana ny Tompon-dakan'ny amboara eran-tany izy ireo ka mamela ny hidiran'ny firaisana ara-nofo sy ny divay an-tsehatra . Manohana ny iray amin'ireo ekipa vitsivitsy izay manana mpanohana maro aho – eny , ireo mpanohana ny ekipam-pireneny, zavatra tsy misy eto amintsika izany- azo anampiana ny Hermanos, ireo mpanohana Anglisy sy ny Koreana Tatsimo. Ny ekipam-pirenena mampatsiaro ahy ny Flamengo ihany no tohanako .
Na dia manohana an'i Arzantina aza i Carlos , dia tsy adinony ny nampiditra ao amin'ny faran'ny lahatsorany, ny andalana milaza fa hankalaza ny mpiandry tsatokazon'ny Breziliana izy, satria , araky ny voalaza, “mety tsy ho vita mihitsy ny hanohitra ny fitiavana hanohana ny ekipam-pirenena Breziliana”.
Mety mbola hisy ny fihaonan'i Brezila milalao amin'i Arzantina eo amin'ny famaranana. Mampitaha ireo fomba fahitan'ireo firenena roa ireo ny fitiavana ny fiadiana ny Tompon-dakan'ny amboara eran-tany amin'ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe “Patriotism FAIL!” [Tsy nahomby ny fitiavan-tanindrazana “[pt]] ny mpitoraka bilaogy amin'ny horonan-tsary Diego Sammet, Asehony amin'ny fiakanjony ny akanjo avy amin'ny baolina kitra Arzantina ny hevi-dehibeny tena mafonja ary manasa ny olona rehetra izy mba handinika ny sisin-tany ara-jeografika sy amin'ny foto-kevi-dehibe ny tena dikan'ny fitiavan-tanindrazana .
Lahatsoratra novakian'i Manuela Tenreiro mialoha.
6 andro izayMeksika